Dubbistoota keenyaa maxxansa keenya Adoolessa 29fi Hagayya 5 bara 2009 gootota Oromoo lamaan Finfinneetti manneen barnootaa Afaan Oromoo Bulchiinsa Mootummaa Nananoo Ormiyaatiin ijaaramanii maqaasaaniitiin moggaafame keessaa kan Jeneraala Waaqoo Guutuu isin dubbisiisuun keenya ni yaadatama. Seenaan Jeneraal Taaddasaa Birruu toorawwan marsariitiifi maddawwan adda addaarra arganne ammoo akka armaan gadiitti sonaa'ee dhiyaateera.
Gootichi beekamaan Oromoo onneensaa quuqamaa ture Taaddasaa Birruu dhalatee kan guddate Godina Shawaa Kaabaa, Aanaa Hidhabuu Abootee, iddoo addaa Siree Morosee jedhamutti.
Taaddasaa Birruu ijoollummaasaatti loon tiksaa turee oggaa umriinsaa barnootaaf gahu Bataskaana Ortodoksiitti afaan Gi’iziitiin barumsa amantii hordofeera.
Abbaansaa lola Xaaliyaaniirratti duulee dirree waraanaa irratti kan wareegame Taaddasaan, otoo du'a abbaasaatti daran gaddee jiruu haatisaas sababa naasuu du'a abbaa warraasaaniitiin ji'a tokko keessatti boqotan. Qormaata jireenyaa kanneeniin Taaddasaan barnootasaa addaan kutuuf dirqame.
Dargaggeessi jaalala maatiisaa dhandhamee hinquufne kun faana abbaasaa bu'uun Xaaliyaaniirratti duuluuf bosona gale. Yeroo kanatti eessumasaa Baaraanbaraas Beekaa jedhaman waliin loltoota ofii uummatanii biyyasaanii faashistoota jalaa buusuuf gara hallayyaa Calanqootti qajeelan.
Xaaliyaanonni meeshaa waraanaa ammayyaafi loltoota leenji'an qabatanii waan hiriiraniif waraana sa’aatiiwwan 24:00f taasifameen Jeneraal Taaddasaafaan naannawa holqa Fincii jedhamutti marfamanii harka kennatan. Gara Moqaadishootti ergamaniis Jeneraal Taddasaatti hidhaan umrii guutuu murteeffame.
Akkuma Jeneraal Taddasaan hidhamaniin Somaaliyaan harka Xaaliyaanootaatii baatee kolonii Ingilizii jalatti kufte. Ta’iin kun immoo Jeneraal Taaddasaa Birruufa'iif carraa gaarii uumee adabichis fashalaa’e.
Dandeettii cimaa qabuunis loltoota Ingiliziitti makame. Yeroon sun yeroo gurraachi akka namaatti hinlakkaa’amneefi qoodiinsi sanyiifi amantii itti daraare waan tureef daran rakkisaa turus ga’umsa olaanaadhaan adoota waliin socho’aa tureera.
Fedhiifi jaalala biyyasaatiif qaburraa ka'uunis gara raayyaa poolisii humna dafee qaqqabaatti jijjiramee biyya ofiitti deebi’e. Sana boodas hogganummaadhaan iddoowwan hedduu hojjechuusaa ragaleen ni eeru.
Qabsoo ummata Oromoo yeroo sanii waliin walqabatee Waldaan Walgargaarsa Maccaafi Tuulamaa akka hangafaatti kan ilaalamuudha. Waldichi qondaaltota mootummaa Hayilasillaasee dhalootaan Oromoo ta’anii iddoo gara garaa hojjetaniif gaaffii miseensummaa dhiyeesse.
Isaan keessaa Birgaadeer Jeneraal Taddasaa Birruun tokko turan. Akkuma loltoota Ingilizii keessaa dhufaniin sirni mootummichaa dhugumaan ummata Oromoof waan dhaabbate itti fakkatee yoon miseensa waldichaa ta’e ilaalchi qoodiinsi sabaa uumamuu danda’a jechuun akka didan dubbatama.
Kanuma gidduutti ministirri muummee gita bittootaa yeroo sanaa, Akiliiluu Habtawaldi Taaddasaa Birruu mana isaatti irbaata affeeree waan tokko akeekkachiise. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu koree duula qubee waan tureef akka ummanni Oromoo baratee doofummaa keessaa bahuuf tattaaffii gochaa ture akka dhaabuuf doorsise.
“Taaddasaa, ati erga duula qubee kana eegaltee baradhaa! baradhaa!jechuu baay'isteetta. Baradhaa jechuun gaariidha garuu eenyu barsiisuu akka qabnu adda baastee beekuu qabda. Nuti yoo xiqqaatee, xiqqaatu Oromoo jaarraa tokko gara boodaatti hambisnee bitaa jirra. Ummata kana nanbarsiisa yoo jette galaanaa, nurra garagala” jechuunis ibseef. Kun immoo Birgaadeer Jeneraal Taaddasaan akka Waldaa Maccaafi Tuulamaatti dabalaman taasise.
Yeroon booda shira anga'oonni olaanoon mootummaa Hayilasillaasee xaxaniin Birgaadeer Jeneraal Taaddasaan namoota saddeet wajjin mana hidhaa 'Alam Baqqany' jedhamutti darbataman. Himanni isaanirratti dhiyaates, “Heera diiguudhaan olola sobaa tokkummaa ummata Itoophiyaa yeroo dheeraaf cimee ture fashaleessu oofuudhaan ummata jeequmsaaf kakaastan” kan jedhu ture. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruufaan dhimma kana callisanii ilaaluurra yaada ittaanu kennanii turan.
“Seera baheen walqixa fayyadamuun waa hunda caala. Carraa koo haa ta'uu, yookaan waanan sanyiidhaan adda ta’eef ta’ee hinbarre. Dur Itoophiyaanonni hanga har’aatti seera mootichaan kennamutti fayyadamaa turan. Ani seera kanaan hinfayyadamuurra himatameera, hidhameeras. Adeemsi kun ana qofa otoo hintaane fakkaattota koos abdii kan kutachiiseedha” jedhan.
“Oromoon akka baratu gochuu kootiin saba addaan qoodde jedhamee dhimma bu’uura hinqabne kan ani hinhojjetiin har’a jaarraa 20fa keessatti yeroo ummanni addunyaa sanyiidhaan, amantiidhaan, gosaafi korniyaan walhinqoodiin tokkummaasaa cimsataa jiru kanatti yaada dulloomaa akkanaatiin na rakkisuun ummata amma barates ta’e, dhaloota dhufu osoo hingaddisisiin kan hinhafne ta'uu manni murtichaa akka hindaganne nan abdadha” jedhanii turan.
Manni murtii olaanaanis Birgaadeer Jeneraal Taaddasaafi namni biraan tokko du’aan akka adabaman murteesse. Murtii du’aa kan mirkaneessu mootii Hayilasillaasee waan tureef mootichi kan Birgaadeerichaa du’arraa gara hidhaa umrii guututti fooyyesse. Kunis fonqolcha mootichaa Mudde 5 bara 1953 aggaamame olaantummaadhaan kan fashaleesse Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa waan ta’eef akka oolmaatti lakkaa’uufiin ta'uutu himama.
Birgaadeerichi Magaalaa Hararitti ergamanii akka hidhamanis ni taasifame. Turtii yeroowwan muraasaa booda immoo gara mana hidhaa Galamsootti geeffamanii turan. Achittis haala mijataa naannawa Harargee turetti gargaaramuun qabsoo eegalan haala haaraadhaan ittifufan.
Kana boodas Fulbaana 2 bara 1966 sirni Hayilasillaasee waan kufeef Dargiin Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruufaa mana hidhaatii gadilakkise. Ammallee sirni Dargii ummataaf akka hintaane kan hubate Jeneraalichi cunqursaa yeroo dheeraaf ummata Oromoorra ture faccisuuf qabsoo hidhannootiif bosonatti galanii sirna Dargii wajjin walfalmii eegalan.
Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu osoo bilisummaa ummata ofiitiif falmaa jiranii Bitootessa 9 bara 1967 Dargiin ajjeese. Taaddasaan du’us hojii boonsaan lammiisaatiif hojjete garaa sabasaa keessa bara baraan jiraata.
Torban kana/This_Week 33669
Guyyaa mara/All_Days 1625464